Waa kuwee kooxaha ugu shabaq ilaaliska badan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan? + Sawirro – Gool FM
(London) 04 Abriil 2016 – Afarta kooxood ee Premier league Manchester United, Arsenal, Manchester City iyo Leicester City ayaa ah kooxaha ugu shabaq ilaasashada badan horyaalka Premier League xilli ciyaaredkan ilaa iyo hadda.
Manchester United ayaa noqotay kooxda ugu shabaq nadiifis badan Premier League xilli ciyaareedkan, waxaana iyadoo aan gool laga dhalin ay garoonka ka baxeen horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 15-jeer.
Arsenal iyo Manchester City ayaa ku soo xiga kuwaasoo garoonka ka baxay xilli ciyaareedkan iyagoo aan gool laga dhalin Premier League min 14-jeer, halka Leicester City oo hoggaanka u ahaysa horyaalka Ingiriiska 13-jeer aan iyadoo gool laga dhalin garoonka ka baxday.
Haddaba halkaan hoose ka eeg afarta kooxood ee goolhayeyaashuda ay si fiican shabaqa ugu ilaaliyeen Premier League xilli ciyaareedkan, iyo goolhayeyaashaas sawirradooda:-